” ကျိုက်​မ​ရောမြို့နယ်​တွင်​ ဖခင်​အရင်းမှ သမီးဖြစ်​သူအား အကြိမ်​ကြိမ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​သည့်​ သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုဖြစ်​ပွား” – ရှအေလငျး
” ကျိုက်​မ​ရောမြို့နယ်​တွင်​ ဖခင်​အရင်းမှ သမီးဖြစ်​သူအား အကြိမ်​ကြိမ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​သည့်​ သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုဖြစ်​ပွား”
ကျိုက်မရောမြို့နယ် လက်ပံကျေးရွာ ဦးဖလုံ လယ်တဲအတွင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ကဝမြို့နယ် သက္ကလကျေးရွာမှ ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​​ရောက်​ရှိလာ​သော ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးစိန်သောင်း အသက် (၅၃)နှစ် သည်
သမီးအရင်းဖြစ်သူ မတင် . . (ခ)မအိ . ၊ အသက် (၁၄) နှစ်(၄)လ အား ယမန်​​နေ့ည ဇူလိုင်​လ ၉ရက်​အထိ (၅)ကြိမ်​တိုင်​တိုင်​ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့​ကြောင်း သမီးအကြီးဖြစ်​သူမှ တိုင်​တန်းသဖြင့်​
လက်နက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထား​သောအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ပိုင် (ခ) နိုင်ဗျင်း အဖွဲ့နှင့် နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့တို့သည် ၁၀ ရက် ၇လ ၂၀၁၉ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။
ကြိုကျမရောမွို့နယျ လကျပံကြေးရှာ ဦးဖလုံ လယျတဲအတှငျးတှငျ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ကဝမွို့နယျ သက်ကလကြေးရှာမှ ရှပွေ့ောငျးလုပျကိုငျရနျရောကျရှိလာသော ဖခငျဖွဈသူ ဦးစိနျသောငျး အသကျ (၅၃)နှဈ သညျ
သမီးအရငျးဖွဈသူ မတငျ . . (ခ)မအိ . ၊ အသကျ (၁၄) နှဈ(၄)လ အား ယမနျနညေ့ ဇူလိုငျလ ၉ရကျအထိ (၅)ကွိမျတိုငျတိုငျ သားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး သမီးအကွီးဖွဈသူမှ တိုငျတနျးသဖွငျ့
လကျနကျနှငျ့ငွိမျးခမျြးရေး လဲလှယျထားသောအဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးကွီး အောငျပိုငျ (ခ) နိုငျဗငျြး အဖှဲ့နှငျ့ နယျမွခေံရဲတပျဖှဲ့တို့သညျ ၁၀ ရကျ ၇လ ၂၀၁၉ နံနကျ ၉ နာရီတှငျ ပူပေါငျးဖမျးဆီးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
“စနေ သားသမီးတွေအတွက်ကတော့ ဒီနှစ် (၂၀၁၉) ခုနှစ်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အချစ်ရေး ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် ယတြာ လေးပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် “
မနက်ဖြန်မှာဖွင့်မယ့် မန္တလေးမြို့ရဲ့ တတိယမြောက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အများသုံးးသန့်စင်ခန်း
LA မှာ …အမိုက်စား အိမ်ကြီးတစ်လုံးကို… မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရလိုက်တဲ့.. စမိုင်းလ်
ငွေကြေး အခက်အခဲကြုံတဲ့ အခါတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် ချက်ချင်း...
ခွေးရူးကိုက်ခံရလို့ ကြိုးတုပ်ထားရတဲ့ ကလေး ခွေလိုတွေအူနေတာ